မိမိ၏နေအိမ်အထိကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသော၀န်ဆောင်မှု - intouchmedicare
လျင်မြန်သော နေထိုင်မှုပုံစံနှင့် အမျိုးမျိုးသော လိုအပ်ချက်များဖြင့် ဒါကြောင့် တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆေးရုံသွားရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ထို့ကြောင့် Intouch Medicare တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးခန်းသည်အိမ်အထိကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ လူနာများကို ပိုမိုသိရှိနားလည်ပြီး လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းစနစ်အသစ်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် လူနာများကိုယ်တိုင် ဆရာဝန်ထံ သွားရောက်ကြည့်ရှုရန် မလိုအပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်သလို ကုသခွင့်လည်း ရှိနေသေးလိမ့်မည်။သက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများ
အိမ်တွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုတာ Intouch Medicare Clinic ၏ အိမ်အထိကိုကာကွယ်ဆေးသွားထိုးပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ခက်ခဲသောခရီးသည် အိပ်ယာကနေပြီးမထနိုင်သော လူနာများ၊ မသန်မစွမ်းသူများ စသည်တို့ကို ဘန်ကောက်နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ လူနာများအတွက် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ အထူးကုဝန်ထမ်းများနှင့် သူနာပြုများမှ ပံ့ပိုးပေးသည်။ သွားလာရေး အဆင်မပြေသူများအတွက် အဆင်ပြေ ချောမွေ့ မြန်ဆန်စေပါသည်။သက်သာသော ဈေးနှုန်းနှင့်ယနေ့ကဲ့သို့ New Normal ခေတ်တွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိုင်းများကိုပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါသည်။
အိမ်တွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုသည် ထိုးနိုင်သော ကာကွယ်ဆေးများတို့မှာ
အသက် 65 အထက်နှင့် အသက် 19ကနေ64 ကြား
နာတာရှည်ရောဂါများမှ ဆီးချို၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါအပါအဝင် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ဆေးရုံတက်ရမည့် လူနာများ
ခုခံအားကျဆင်းမှု သို့မဟုတ် ခုခံအားကျဆင်းစေသော ဆေးဝါးများသုံးနေသူ
2.အသည်းရောင်ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး(Hepatitis B vaccine)
ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးရသူ (သို့)မကြာခဏ သွေးသွင်းသောလူနာများ
ဆီးချိုရောဂါခုခံအားကျသူ ချို့တဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ခုခံအား ထိန်းဆေးများသုံး
3. ဆုံဆို့နာ ကာကွယ်ဆေး -မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးDT
သက်ကြီးရွယ်အိုများ အတွက်ရောဂါကာကွယ်ရန် လုံလောက်သော ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးစွမ်းနိုင်စေရန်အတွက် ဆရာဝန်မှ အကြံပြုထားသော ကာလအတိုင်းထိုးသင့်ပါသည်။
4. သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး (HPV)
အသက် ၉ နှစ်မှ ၂၆ နှစ်ကြား အထူးသဖြင့် အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်ကြား ကလေးများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ထိုးထားသူသည် လိင်မဆက်ဆံမီကပင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးသည် ပိုမိုထိရောက်သည်။ အသက် 26 နှစ်ကျော်သူများအတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ထိုးသင့်ပါသည်။
အိမ်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများသည် ဆေးခန်း၏ ပိုမိုးရှင်းများလက်ခံရရှိခြင်းကို မရတော့ပေ။
ယာဉ်ဝန်ဆောင်ခသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ တည်နေရာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
COVID ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆေးထိုးဝန်ဆောင်မှုမရှိပါ။ အစိုးရက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြန်ပြောဖို့ စောင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသောကြောင့် အဆင်ပြေပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ဆရာဝန်ထံ သွားရောက်ပြသရန် မလိုအပ်ပါ။ခရီးစရိတ် သက်သာပါမည်။
ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသော အဖွဲ့ဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
သင့်လျော်သော မိမိကိုယ်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များထံမှ ရယူနိုင်ပါသည်။
အိမ်မှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက် Intouch Medicare Clinic ဖြင့် တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး၊ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး၊ အသည်းရောင်အသားဝါ B ကာကွယ်ဆေးများ သို့မဟုတ် အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ ဆက်သွယ်ရန် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် သင့်မိသားစုကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် Google ရှိ ကျွန်ုပ်အနီးရှိ ဆေးခန်းများ သို့မဟုတ် နီးစပ်ရာ ဌာနခွဲများကို ရှာနိုင်ပါသည် ။